2021 IWCA Collaborative @arui - Fikambanan'ny Ivotoerana manoratra iraisam-pirenena
Date: Alarobia 7 aprily 2021 tamin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 4:15 hariva
Program: Azafady mba jereo ny Fandaharam-piaraha-miasa IWCA an-tserasera 2021 raha mila fanazavana momba ny fotoam-pivoriana tsirairay.
Mode: Session Zoom synchronous sy horonan-tsary tsy mirindra. Raha mila torolàlana momba ny fampivelarana fampisehoana mivantana na tsy misy ifandraisany, jereo ny IWCA Remote Presenter Access Guide.
fisoratana anarana: $ 15 ho an'ny matihanina; $ 5 ho an'ny mpianatra. FITSIDIHANA hamaika.org to register.
Raha tsy mpikambana ianao dia mila miditra amin'ny fikambanana aloha. FITSIDIHANA hamaika.org hiditra amin'ny fikambanana.
Ny isan'ny mpianatra dia 15 $.
Ny maha-mpikambana matihanina dia $ 50.
Satria manan-danja manokana ho an'ny WPA ny fotoam-pivorianay, dia manasa ireo WPA ivon-toerana tsy hanoratra izahay hanatevin-daharana ny fikambanana amin'ny taha-pahafahan'ny mpianatra ($ 15) ho an'ny mpikambana iray andro hanatrehana ny fiaraha-miasa. Aorian'ny fidirana dia mila misoratra anarana amin'ilay hetsika izy ireo amin'ny taha matihanina ($ 15).
Plenary Session avy amin'i Courtney Adama Wooten, Jacob Babb, Kristi Murray Costello, ary Kate Navickas, tonian-dahatsoratry ny Ireo zavatra entinay: paikady hahafantarana sy fifampiraharahana amin'ny asa ara-pihetseham-po amin'ny fitantanan-draharahan'ny programa fanoratana
Seza: Dr. Genie Giaimo, Middlebury College, ary Yanar Hashlamon, Oniversiten'i Ohio State
Theme: Fandraisana an-dàlam-pifandraisana amin'ny zotram-panoratana
Amin'ny lafiny idealy, ny faritra ifandraisana dia toerana ahitantsika ny marimaritra iraisana sy iraisan'ny samy hafa. Raha ny marina dia mikendry izahay fa angamba tsy mahazo azy ireo. Eo afovoan'ireo tra-boina niainan'ny mpifindra monina amin'izao tontolo iainana misy antsika izao dia zava-dehibe ny fanekena fa ny habaka fitomboana sy ny fahafahan'ny sasany dia sehatra fanararaotana sy fanilihana ho an'ny hafa. Ny tanin'ny vondrona iray misy ny fanararaotana dia ny fanesorana ny iray hafa.
Raha mitazona izany ao an-tsaina izahay dia manome sosokevitra fa ny faritry ny fifandraisana dia maodely mety hizahana ny fihenjanana amin'ny asa sy teôria foibe fanoratana. Ny faritra ifandraisana dia "sehatra ara-tsosialy ifanaovan'ny kolontsaina, fifandonana, sy fifanolanana, matetika amin'ny sehatry ny fifandraisana tsy misy ifandraisany amin'ny fahefana" (Pratt 607). Ao amin'ny sanganasa Writing Center, ny faritra ifandraisana dia napetraky ny manam-pahaizana maromaro tao anatin'izay roapolo taona lasa izay, ireo ivon-toerana fananganana azy ireo dia “faritra sisintany”, na faritra fifandraisana amin'ny fiteny, kolontsaina ary fifampiresahana (Severino 1994; Bezet 2003; Sloan 2004; Monty 2016 ). Ny manam-pahaizana hafa dia nanamboatra ivon-toerana fanoratana ho toy ny faritra ifandraisana ary aorian'ny kolontsaina ho an'ireo mpanoratra voahilikilika mba hametrahana ny tenany manoloana ireo lahateny mibahan-toerana (Bawarshi sy Pelkowski 1999; Wolff 2000; Kain 2011). Romeo García (2017) dia manoratra fa ny faritra ifandraisan'ny Writing Center dia aseho matetika fa tsy mitombina ary maneho ny tsy fitoviana satria ny fifanolanana raikitra na ahorianika no tokony halamina na horaisina (49). Mba hamoronana toerana misimisy kokoa dia mila mandinika ireo fihenjanana amin'ny asantsika isika ary miatrika ireo faritra ifandraisan'ny olona rehefa miova sy mifototra amin'ny tantara. Ny tantara sy ny habaka tsy ara-drariny dia manintona ny saintsika amin'ny fomba famolavolana ny corporatization sy ny fitsitsiana andrana amin'ny asa ataontsika; ahoana ny fomba fanao sy ny teôria mety hifanipaka amin'ny asantsika; ny fomba iainan'ny mpiasa sy mpanjifantsika tena mora tohina ny foibe fanoratana sy ny fampiharana ny foibe fanoratana; ary ny fiantraikan'ny firafitry ny fikambanana amin'ny firosoana etika amin'ny pedagogy foibe fanoratana. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy maintsy dinihintsika ny fiantraikan'ny faritra ifandraisan'ny ao anatiny sy ny ivon-toerana fanoratana manodidina azy, toy ny andrim-panjakana midadasika kokoa, ny Fanjakana, ny governemanta, ary ireo rafitra hafa momba ny herinaratra eo amin'ny asa aman-draharaha ataontsika.